24th April 2019, Wednesday
काठमाडौं । संसदीय समितिहरूमा रहने सांसदहरूको नाम घोषणासँगै संसदीय समितिहरू गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ । यससँगै संसदीय समितिहरूको सभापतिमा दाबी गरिरहेका सांसदहरूको दौडधुप पनि बढेको छ । प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका चारवटा समितिमा बैठकबाट सभापतिहरू चुनिनेछन् । संसदीय काम प्रभावकारी बनाउन अब छिट्टै सभापति चयन हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताउँदै आएका छन् ।
१४ मध्ये सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक बाँकी सबै समिति सत्तारुढ दलका हुनेछन् । संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई पनि एक÷एकवटा सभापति दिने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढिरहेको बताइएको छ । अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईको नाम करिबकरिब निश्चितजस्तै भएको छ । विवादमा तानिएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम समितिबाट पारित नगर्ने सन्दर्भमा उनले देखाएको सक्रियता र अगुवाको भूमिकाले पनि भट्टराई नै भावी सभापति हुन् भन्ने पार्टी पंक्तिमा स्थापित भएको छ । उनकै सक्रियतामा जोशीका विवादास्पद काम र सर्टिफिकेटसँग सम्बन्धित तथ्य संकलन भएको थियो । यद्यपि, सुनुवाइ समितिमै नेकपाका अर्का सिनियर र लोकप्रिय नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि छन् । अर्थ समितिमा पनि रहेकाले उनले सुनुवाइ समितिको नेतृत्वमा खासै रुचि राखेका पनि छैनन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेलाई अर्थ समितिको सभापतिका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
कांग्रेसले नेतृत्व लिने सार्वजनिक लेखा समितिमा भने डा. मीनेन्द्र रिजाल र भरतकुमार शाहमध्ये एक सभापति बन्ने चर्चा छ । त्यस्तै, विकास तथा प्रविधि समितिमा गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार र कल्याणी खड्काको नाम चर्चामा छ । तीनमध्ये एक जना सहमतिमै सभापति बन्ने बुझिएको छ । यद्यपि, तीनै सांसदले शीर्ष नेताहरूसँग आफ्नो चाहना राखिसकेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जनाद्र्धन शर्माको चर्चा छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा खगराज अधिकारी, हितबहादुर तामाङ, सरिता न्यौपाने र सुरेश राईमध्येबाट सभापति बन्ने चर्चा छ । उता, महिला तथा सामाजिक समितिमा अमृता थापा, पार्वत गुरुङ, कृष्ण राई, खेम लोहनी र गणेश ठगुन्नाको चर्चा छ । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिमा कृष्णप्रसाद दाहाल, भूमि त्रिपाठी, दलबहादुर राना, शान्ता चौधरीलगायत सभापतिका दाबेदार छन् ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अधिवक्तासमेत रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको एकल चर्चा छ । उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा जयपुरी घर्ती, देवेन्द्र पौडेललगायतको चर्चा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, अग्नि सापकोटालगायतका नेता छन् । वरिष्ठ नेता नेपालकै रुचिअनुसार यो समितिको नेतृत्व चुनिने निश्चित देखिए पनि उनी अहिलेसम्म मौन छन् ।
प्रभुको पाँच नयाँ शाखारहित बैंकिङ सेवा
मेलम्चीमा बढी भुक्तानी र अतिरिक्त पेस्की
एआईजीको दरबन्दी थप्न लबिङ
नेपाली श्रमिक ठग्न कतारमा पनि अर्को सिन्डिकेट
गरिब र धनीलाई छुट्ट्याएर पढाउने व्यवस्था खारेज गरौं ः बिडारी
अनुसन्धानका प्रहरी आफैं विवादित
जाडो सकिने बेला सिरक वितरण ?
सेवा शुल्क भनेर कुनैपनि शुल्क लिन पाँइदैनः खतिवडा
स्ववियु चुनाव अन्योलमा
फोरजी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता
अरुणिमाकोे ३४ औस् स्थापना दिवस सम्पन्न
वैरोको पिकनिकमा कर्मचारीबीच कुटाकुट
को–को बन्दै छन् नेकपामा पोलिटब्युरो ? पूर्वमाओवादीमा गुट मिलाउन सकस
ShareTweet काठमाडौं । जिल्ला एकीकरण टुंगिएलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट- ...
गुलियो बेच्नेको तीतो हर्कत
ShareTweet काठमाडौं । उच्च गुणस्तरका बिस्कुट, कुकिज र पव उत्पादन गर्दै- ...
यी कम्पनीको बैंक खाता रोक्का गरिँदै
ShareTweet काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तथा आयकर गरी २१ करोड- ...
ShareTweet काठमाडौं । तीन दिनअघि सरकारले निकै तामझामपूर्वक ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ सुरु भएको घोषणा ग¥यो । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥यायौं’- ...
अब टाउको कमै दुख्ला
ShareTweet केही दिनपूर्व एकजना साथी प्रफुल्ल मुद्रामा देखिए । उनी प्रफुल्ल हुनुका एउटै कारण थियो– ‘पब्जी’ माथि प्रतिबन्ध । पब्जी–पीडित अभिभावकको लहरमा उनी पनि आबद्ध- ...
ShareTweet कविता लेख्नुको अर्थ सत्यको अन्वेषण गर्नु हो । जुन कविता सत्यको अन्वेषण गर्न चुकेका हुन्छन्, मानवीय गरिमा र संवेदनालाई टिप्न असक्षम ठहरिन्छन्, त्यस्ता कविता- ...
आईजीले बनाए गृहमन्त्रीलाई ‘उल्लु’
ShareTweet काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले गृहमन्त्री- ...
एनआईसीको ‘एक नेपाली, एक डिम्याट खाता’
ShareTweet काठमाडौं । एनआईसी एसिया क्यापिटलले नयाँ वर्ष २०७६ लाई ‘एक- ...
‘प्रधानमन्त्री’को नाममा अनियमितताको खेती
ShareTweet काठमाडौं । नयाँ वर्षको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा- ...